K: ဗမာ့ စောင်း - အိုင်ဝို ဂျီးမား နဲ့ ဂျပန် စစ်ပြန် ကြီး များ
ဗမာ့ စောင်း - အိုင်ဝို ဂျီးမား နဲ့ ဂျပန် စစ်ပြန် ကြီး များ
ဒီ မြင်ကွင်း ကျယ် သုံးခု .. အတွေး ထဲ မှာ..စု ပြီး ဖွဲ့တည် နေ တာ တော့ ကြာ လှ ပြီ။ ခု တော့..ဧရာ ၀တီ မြစ်ဝ ဒေ သ က.. ရုပ်ပျက် ဆင်း ပျက် စု ပုံ နေ တဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ် တွေ ကို..မမြင် ရက်- မြင် ရက် - မြင် နေ ရင်း က ကို၊ လွန်ခဲ့ တဲ့ ၄ နှစ် လောက် က..အမှတ်မထင် ကြည့် လိုက် ဖူး တဲ့.. ဗမာ့စောင်း ဆိုတဲ့..သမိုင်း ၀င် ဂျပန် ရုပ် ရှင် ထဲ က၊ ရာ ထောင် ချီ တဲ့ အလောင်း တွေ အ တွက်၊ ဘ၀ တခု လုံး ကို လမ်းကြောင်း ပြောင်း ပြစ် လိုက် တဲ့..အညတြ ဂျပန်စစ်သား လေး မစ်ဆူအီ ကို၊ သတိ ရမိ တော့တယ်။
တကယ်က..ဒီ ဇတ်လမ်း တ ခု လုံး ဟာ၊ ကမ္ဘာ့စစ်ကြီး တွေ ရဲ့ ရူးသွပ် ကြောက်မက်ဘွယ် ကောင်းမူ တွေ ကြား ထဲ က.. လူတယောက် ချင်း စီမှာ ရှိ နေ နိုင် တဲ့ လူသားစိတ် ကလေး ကို၊ အနု ပညာ မြောက် အောင် ဖော် ပြ ထား တာပါ။ ဒီ အခွေ လေး လက်ထဲ ရောက် လာ တော့..စိတ် တောင် မ၀င်စား မိဘူး။ အ ဒေါ် တယောက်က.. ဗြိတိသျှ ရုပ်သံ မှာ ..Burmese Harp ဆို ပြီး လာ တာ နဲ့..စိတ်ဝင်စား ပြီး..အခွေ နဲ့ လိုက် ကူး ထား လိုက်တာ။ သူ ကူးထား တဲ့ ဗီဒီယို တိပ် ကို..တခါ..ဗီစီဒီ ထပ် ကူး။ စက် ထဲ ထိုး ကြည့် တော့..လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ပေါင်း ၅၀ ကျော် က..အဖြူ အမဲ ရုပ်ရှင်က.. မှုံဝါး လွန်းလို့..ဆက်တောင် မဖွင့် ဖြစ် တော့ တာ။ နောက်တော့ မှ..အဒေါ် က..သိပ် ကောင်းလွန်း လို့..ကြည့် ဖြစ် အောင် ကြည့် ပါ ဆို တာနဲ့..ကဲ..ကြိုးစားပမ်းစား..ကွန်ပြူ တာ နဲ့ အနီးကပ် ဖွင့် ကြည့် တော့မှ.. အဆင် ပြေ တယ်။ တကယ် ကြည့် လိုက် တဲ့ အခါ ကျ တော့.. ဗမာ ပြည် ရေ မြေ နောက်ခံ..ဗမာ့ ဂီ တ သီချင်း တွေ..ဗမာ လူမျိုး ဇတ်ပို့ ဇတ် ရံ တွေ နဲ့..မယုံ နိုင် စရာ ကောင်း လောက် အောင်..စွဲ ဆောင် မူ ရှိ လွန်း လို့..၂ ခါ တိ တိ ထပ် ကြည့် ရ တဲ့ အထိ ပါ။
ငှါး ကြည့် ရှာကြည့် ဖို့ မလွယ် တဲ့ အတူ တော့..ဇတ်လမ်း စဆုံး ပဲ ပြော လိုက်တော့ မယ် နော်-
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်း က..ဗမာ ပြည် မှာ တာဝန် ကျ တဲ့.. ဖျော်ဖြေ ရေး တပ်ခွဲ လေး တခု မှာ..ကြောရိုး တည် ထား တာပါ။ ထုံးစံ အတိုင်း..ဒီတပ် ခွဲက.. ဂျပန် တပ်သား တွေ..စိတ်ဓါတ် မကျ ရ အောင်.. စစ်သီချင်း တွေ အမျိုး မျိုး နဲ့ တာဝန် ယူ ဖျော်ဖြေ ရတယ်။ တပ် မှူးကိုယ် တိုင် က.. ဂျပန် ပြည်မှာ..သံစုံ တီး ၀ိုင်း ခေါင်းဆောင် ကနေ..စစ်ထဲကို ဆင့် ခေါ် ပါ လာ သူ။ အဲဒီ အထဲက.. တပ်သား လေး မစ်ဆူ အီ ဆို တာကလည်း..နဂို ထဲက..ဂီ တ ပါရမီ ထက်သန် သူ ဆိုတော့.. သူတို့ တပ်စခန်း ချ ရာ ကျေး ရွာ သား တွေ နဲ့..ရင်းနှီး ခင် မင် ရင်း..ဗမာ စောင်း ကို ..ခုံခုံ မင် မင် တီးခတ် လာ ခဲ့ တယ်။ ဒီ နေ ရာ မှာ..ဆရာ တင် မိုး ပြော ပြတဲ့.. သူငယ် စဉ်က.. ရွာမှာ..ဂျပန် စစ်သား တွေ နဲ့..ခင်မင်..ပြီး..တယော ထိုး လေ့ ရှိ ကြ တယ် ဆို တာ လေး ကို တောင်..သတိ ရ မိ တော့တယ်။
ဂျပန် တွေ စစ်ရှုံး ပြီး ..ဒုတိယ ကမ္ဘာ စစ် ကြီး ပြီး သွား ခဲ့ ပေမဲ့.. ကျဲ ပြန့် နေတဲ့..အဆက်အသွယ် မရ တဲ့..တပ်စု အတော် များ များ ကတော့..ဒီ သတင်း ကို မသိ ကြ ဘူး ။ ဒီ အထဲ မှာ..မစ်ဆူအီ တို့ ဖျော်ဖြေရေး တပ် ခွဲ လေး လည်း ပါ တာပေါ့။ နောက်တော့..အလွယ် တကူ ပဲ..အင်္ဂလိပ် ( မဟာ မိတ်) တွေ ဆီ လက်နက် ချ ပြီး.. စစ်စခန်း တခု မှာ..သုံ့ပန်း အဖြစ်..ဂျပန် ပြန်ဖို့ စောင့် နေ တဲ့ အချိန်... တောင်ကုန်း ကြီး တခု ပေါ် မှာ တပ် စွဲ ပြီး..ခံ ပစ် နေ တဲ့.. ဂျပန် တပ် စိတ် တခု ကို.. လက်နက် ချ ဖို့..သွား ပြော ဖို့.. တာဝန် ပေး တဲ့ အခါ..မစ်ဆူ အီ ကပဲ..တာဝန် ယူ လိုက် တယ်။
သူ တောင်ကုန်း ကြီး ပေါ် ကို တက် လာ ပြီး..စစ် ရှုံး နေပီ ဖြစ် ကြောင်း..လက်နက်ချ ဖို့ ပြော တဲ့ အခါ.. အပေါ်မှာ ရှိနေ တဲ့..တပ်စု ကြီး က ..လုံး ၀ လက်မ ခံ ပါဘူး။ ခက် တာက..သူ့မှာ..မိနစ် ၃၀ ပဲ အချိန် ရ တယ်။ ဒီဖက် မှာ လည်း..ဘယ်လို မှ ညှိ လို့ မရ။ သူ- ဒီလူ တွေကို အဓိပ္ပါယ် မဲ့ မသေ စေ ချင် ဘူး။ နောက်ဆုံး..အင်္ဂလိပ် တွေ ကို၊ သူ့ကို အချိန် ထပ်ပေး ဖို့..အချက် ပြ တာကို..အထင် လွဲ ပြီး..၀ိုင်းဝန်း ရိုက်နှက် ကြ လို့..သူ လည်း..ဂူ ထဲ မှာ မေ့မျော နေ တုန်း.. အချိန် စေ့လို့..ဒီတောင်ကုန်း ကြီး ကို မိုင်း ခွဲ ဖြို ခွင်း ခံ လိုက် ရ ပါတော့တယ်။ သူ သတိ ရ လာ တော့.. ပျံ့ကျဲ နေ တဲ့ အလောင်း တွေ။ သူ စခန်း ကို ပြန် မသွား တော့ဘူး။ နီးရာ ဘုန်းကြီး ကျောင်း တခု မှာ..သင်္ဃန်း ၀တ် အကူ အညီ တောင်း ပြီး .. သူ လျှောက် သွား ကြည့် တယ်။ နေ ရာ တိုင်း မှာ.. .စစ်ရှုံးခြင်း ..ဆုတ်ခွါ ခြင်းတွေ.. ရောဂါ တွေ .. အလောင်း တွေ.. ပင် လယ် ကမ်းစပ် တွေ မှာ လည်း..လှိုင်း ပုတ် လို့..အပုံ လိုက်..အထပ် လိုက်..ဂျပန် စစ်သား တွေ..အိမ်မပြန် နိုင် ကြ တော့ဘူး။ အဲဒီ အချိန် မှာ..သူ့နှလုံး သား ကို စေ့ ဆော် နေ တာက..ဒီ ခန္ဓာ ကိုယ် တွေ မှာ.. မိသားစု တွေ..ဘ၀ တွေ.. ဂုဏ်သိက္ခာ တွေ ရှိ ခဲ့ တယ်။ ဒီ လူတွေ ကို.. ဂုဏ် သိက္ခာ ရှိ ရှိ မြုပ် နှံ သဂြိုဟ် ပေး ရမယ်... ဗုဒ္ဓ ဘာသာ အရ.. ဘ၀ ကူး ကောင်း အောင်.. သရဏ ဂုံ တင် ပေး ရမယ်.. ဆို တဲ့ အသိ ပဲ။ တကယ် ကို..သူ လုပ် ခဲ့တယ်။ တယောက် တည်း.. ပေါက်တူး တလက် နဲ့..အလောင်း တွေ မြုပ် တယ်။ တနေ ရာ ပြီး တနေ ရာ လိုက်ရှာ တယ်။
အဲဒီ အချိန် မှာ..မစ်ဆူ အီ သေပီ လို့..ထင်ထား ကြ တဲ့...သုံ့ပန်းစခန်း ထဲ က..ဂျပန် တွေ ဆီ ကို... မစ်ဆူ အီ နဲ့တူ တဲ့..ဘုန်းကြီး တယောက် ရဲ့ သတင်း က.. ဒေသခံ..ဈေး သည် တွေ ဆီ က တဆင့် ရောက် လာခဲ့တယ်။ တပ်ရင်း မှူး က.. ကြက် တူ ရွေး လေး တကောင်ကို.. ` မစ်ဆူအီ..ငါတို့နဲ့အတူ ဂျပန် ပြန်ရ အောင်..´ လို့ သင်ပေး ပြီး.. အဲဒီ ဘုန်း ကြီး ဆီ ကို ရောက် အောင် ..ဈေး သည် တွေ က တဆင့် ပို့လိုက် တယ်။ ဒီ ရုပ်ရှင် ရဲ့..အထွတ် အထိပ်..ရင်ကို ဖမ်းဆုပ် နိုင် တဲ့ အခန်း လေး ကတော့.. မစ်ဆူ အီ က..သူ့ရဲဘော် တွေ ရှိရာ..သုံ့ပန်းစခန်း နား ကို ရောက် လာပီး..မလှမ်းမကမ်း မှာ ရပ် ပြီး..သူတီးနေ ကျ..စောင်း လေး ကို တီး ပြ ရင်း.. သူ- မစ်ဆူအီ ဖြစ်ကြောင်း လာ ပြ တဲ့ အခန်း လေးပါ။ သံဆူး ကြိုး တွေ နောက် က..ရဲဘော် တွေ က.. ပြုံ တိုး ပြီး ကြည့်ကြ။ အော်တဲ့ သူ က..အော် ကြ.. ငိုတဲ့သူ က..ငိုကြ။ ကြက်တူ ရွေး လေး ကလည်း..
(၁၉၈၅ ခု မှာ..ရောင်စုံဖလင် နှင့် ပြန် ရိုက် သော..ဗမာ့စောင်း မှ..ဇတ် ၀င် ခန်း)
ဗမာ့ စောင်း လို ပဲ.. စစ် နဲ့ လူသား ဆန် မူ တွေ ကို အလှပ ဆုံး ရက် ခြယ် ထား တဲ့..ဂျပန် ကား တကား ကို..ပီးခဲ့တဲ့ လက ပဲ..ကြည့် ဖြစ် လိုက် ပြန် တယ်။ ဟောလိဝုဒ် နံမယ်ကျော် Clints Eastwood ရိုက် တာ ဖြစ် ပြီး.. အော်စကာ ဇကာတင် ခံ ရတဲ့..နံမယ် ကျော်..အဆင့်မီ ကား ကောင်း တခုပါ။ တကားလုံး ဂျပန် စကား ပြော ဖြစ် ပြီး..မင်းသားက..the last samurai ထဲက.. ၀ါတာနာဘီ ပါ။ ဒါပေမဲ့..တကယ့် ဇတ် ကောင် ကတော့..မုန့်ဖုတ်သမားလေး ကနေပီး..စစ်ထဲ ဆင့် ခေါ် ပါလာတဲ့..တပ်သားလေး..ဆိုဂီ ကပဲ..တကားလုံး ရဲ့ အနှစ်သာ ရ ကို ထောက်ပြ သွား ခဲ့ တယ်။
အိုင်ဝိုဂျီးမား ဆို တာ.. ဂျပန် ရေ ပိုင် နက် ထဲမှာ..ထိုး ထွက် နေတဲ့..မီးသင့်ကျောက် တောင် ပူစာ ကျွန်း လေး တခု။ ဒီကျွန်း ပေါ် မှာ..အမေရိ ကန် တွေ ကို ခုခံ ဖို့..ဂျပန် တပ်စု တစု ပြင် ဆင် နေ ကြ ရတယ်။ သူတို့ တွေ ဒီကျွန်း လေး မှာ ပိတ်မိ ပြီး..သေ ကြ ရ တော့ မယ် ဆို တာ..ကို လည်း.. အားလုံး လို လို က..သိ နား လည် နေ ကြ တယ်။ ရိက္ခာ ပြတ်လပ် အားအင် ချိ နဲ့ နေတဲ့..စစ်သား တစု...ကမ်းစပ် မှာ..ကတုပ်ကျင်း တူး နေ ကြ တုန်း.. မောပန်းလွန်း တဲ့ ဆိုဂီ က.. ` အမေရိကန် က..နိုင်မှာပဲ လေ. ငါတို့ ဒီကတုပ် ကျင်း တွေ ကို ဘာ အတွက် တူး နေ ရ တာ ပါ လိမ့် ကွာ..ဒီ ကျွန်း ကို..ပေး လိုက် ပြီးရော ကွာ..´ လို့အချင်း ချင်း ညီးညူ လိုက် မိ တာကို..သူ့တပ် ဗိုလ် ကြားသွား လို့..အသေ ဆော် တော့မဲ့ အချိန်မှာ ပဲ.. ဗိုလ်ချုပ် ကြီး..ကူရီ ဘာရာ ရှီ ( ၀ါတာနာဘီ) ရောက် လာ ပြီး..ကယ်လိုက် တာနဲ့.. ဇတ်လမ်း လေး ကို ဖွင့် ထား ပါတယ်။ တကယ် တော့..ဆိုဂီ ရဲ့ ရိုးသားတဲ့ အလျော့ပေး စိတ်ဓါတ် က.. ဘာ တာဝန် မှ မယူ..ဘာအကူအညီ မှ မပေး နိင် ပဲ..အသက် ပေါင်း များစွာ ကို..ဒီကျွန်းလေး ပေါ် မှာ အသေ ခံ ခိုင်း တဲ့.. ဂျပန်တော်ဝင် သေနာပတိချုပ် ကြီး ရဲ့ အမိန့် ထက် ..အများ ကြီး အပြစ် ကင်း တယ် လို့ ထင်ပါတယ်။ အမေရိကန် အကြောင်း သိတဲ့..အမေရိကန် ပြန် ဗိုလ်ချုပ် ကြီး..ကူရီ ဘာရာရှီ ရဲ့..တာဝန်ယူ တတ်မူ..လူသား ဆန် မူ...လူ့အသက် တွေ ကို အလေး ထား မူ.. ဒီ ခံစစ် အပေါ် မှာ..ပက တိ အတိုင်းသုံးသပ် နိင်မူ.. ကို လည်း.. ဂျပန် တို့ရဲ့ ဘူရှီဒို စိတ်ဓါတ် ( အရှုံးမပေး..ကိုယ်တိုင် အဆုံးစီရင် မူ) နဲ့.. ရောယှက် ပြီး ပြသွား တာ ဟာ ..တကယ် အတွေး ပွား စရာ ကောင်းလှ ပါ တယ်။
လော့စ်အိန်ဂျလိစ် အိုလံပစ် ပွဲ မှာ ပြိုင် ခဲ့ဖူး တဲ့..မြင်း ခုန် ချန်ပီ ယံ တပ် မှူး နာရှီ က လည်း..ဒဏ်ရာ အပြင်း အထန် နဲ့မိ လိုက် တဲ့..အမေရိ ကန် စစ်သား ကို.. ရှားပါး တဲ့ ကြား ထဲက ပဲ..ရှိတဲ့ မော်ဖင်း လေး ထိုး ပေး ခဲ့ တယ်။ နောက် ဆုံး အမေ ရိကန် စစ်သား သေ သွား တော့..အိတ် ထဲ က..ထွက် လာ တဲ့.. သူ့အမေ ရဲ့ စာ လေး က ပဲ.. ဒီ အဖြစ် အပျက် လေး ကို အဓိပ္ပါယ် ဖြည့် လိုက် တယ် ။
ဒီကျွန်း ပေါ် ကို..အပြစ် နဲ့ ရောက် လာ တဲ့.. တဘား ကျ..စစ်ဗိုလ် လေး ရှီမီဇူ ရဲ့ အဖြစ် ကလည်း..စိတ်ဝင် စား စရာ ကောင်း တယ်။ သူ့ကို ကင်ပေ တိုင် ( ထောက်လှမ်းရေး ) က.. မွေး ထား ပေ မဲ့.. တရက် မှာ.. သူ့ဆရာ နဲ့ အတူ မြို့ထဲ ပတ္တရောင် လှည့် တုန်း...နိုင်ငံ တော် အလံ မလွှင့် လို့ ဆို ပြီး.. အိမ် တအိမ် ကို ပြသာနာ ရှာ တယ်။ အိမ် ရှင် မ ခမျာ..လင်က..စစ် ထွက် နေတော့..ကလေး ငယ် လေး ၂ ယောက် နဲ့..မအား လို့ဖြစ် ကြောင်း..တောင်းပန် နေ တုန်း..မွေး ထား တဲ့ ခွေး က..ထိုး ဟောင်။ ကင်ပေ တိုင် အရာ ရှိ မှာ..လူ ကိုသာ အနိုင် ကျင့် လို့ ကောင်း ပေမဲ့..ခွေး ဟောင် တော့ ရှက် ရှာ ပြီး..အတူပါ လာတဲ့.. ရှီမီဇူ ကို..ခွေး သတ် ခိုင်း ပါ တော့တယ်။ ဒီ ခွေး လေး ကိုပဲ..လုံခြုံ ရေး အတွက် အားကိုး နေ ရတဲ့ သားအမိ ရဲ့ ငို ရှိုက် တောင်းပန် သံ တွေ ကြား မှာ.. ရှီမီဇူ တယောက်.. သေနတ် ကို မိုး ပေါ် ထောင် ဖောက် ပြ ပြီး.. သူ့ဆရာ ဆီ ပြန် အထွက် အလာ... လမ်း တ၀က် ရောက် မှ..ခွေး ဟောင် သံ ပြန် ကြား ပြီး.. ရာထူး ချ ..ရှေ့ တန်း ပို့ ခံ ခဲ့ ရ ပုံ လေး က.. ရီ စရာ ကောင်း သ လို လို..မော စရာ ကောင်း သလို လို..။
အရက် စက် ဆုံး အဖြစ် အပျက် တွေ ထဲ မှာ..ဂျပန် များ တရုတ် နန်ကျင်း မြို့ ကို သိမ်း ပိုက် ခဲ့ တဲ့ အဖြစ် ကြီး လည်း တခု ပါ ခဲ့ ဖူးတယ်။ ဘယ် လောက် ထိ တောင် ရက်စက် ခဲ့ လည်း ဆို ရင်.. ဒီ အကြောင်း တွေ ကို..ဒီ ဖက် ခေတ် ရောက် မှ.. သုတေ သန လုပ်..စာအုပ် ထုပ် ခဲ့ဘူး တဲ့.. အမေရိကန် ဖွား..တရုတ် လူမျိုး.သမိုင်း ပညာ ရှင် အမျိုး သမီး ဟာ..ဒီ စာအုပ် လည်း ထုပ် ပြီး..နံမယ် လည်း ကြီး.. မိသား စု နဲ့ ပျော် ရွှင် နေ တဲ့ ကြား ထဲ က.. တရက် မှာ..ကိုယ့်ကို ကိုယ် အဆုံး စီရင် သွား ခဲ့ ဖူး ပါ သတဲ့။
တလော ကပဲ.. ဂျပန် အမျိုး သမီး တယောက်က.. နန်ကျင်း ပြန် ဂျပန် စစ် သား ကြီး တွေ ကို..လိုက် လံ ရှာ ဖွေ မေးမြန်း ထား တဲ့..documentary တခု တီဗီ မှာ ကြည့် လိုက် ရတယ်။ ဒီ အမျိုး သမီး က..တော် တော် မေး တတ် တယ် လို့.. ပြော ရမယ်။ ဟိုက..၉၀ ကျော် အဖိုး ကြီး တွေ ခမျာ တော့..သူ မေး တဲ့ လမ်း ကြောင်း အတိုင်း တဲ့ တဲ့ ၀င် တာပဲ။ ဥပမာ- `အင်း..အဲဒီ တုန်း က.. ကလေး တွေ မိန်း မ တွေ ကို လည်း ..သတ် ရ တာပဲ နော်...´ လို့ အသာလေး ထောက် လိုက် ရင်.. `အာ..ဟုတ်တယ်.. အကုန် သတ် ရ တယ် ´ လို့.. သေချာ ကို ဖြေ တော့တာပဲ။ ` အဲ.. မိန်းကလေး တွေ ကို မုဒိန်း ကျင့် ကြ တော့..စစ်သား တွေ အကုန် ပါ တာပဲလား ´ဆို ရင် လည်း....`အော်..ပါ တာပေါ့ ..´ ဆို ပြီး..သူ့ အတွေ့အကြုံ တွေ တောင် ပြော နေ သေး။
တနေ ရာ မှာ ကြည့် နေရင်း..တီဗီ မြင်ကွင်း ထဲ..ရုတ် တရက် အဘွား ကြီး တယောက် ၀င် လာ တယ်။ အဘိုးကြီး ရဲ့ မိန်း မ ဖြစ် မယ် ထင် တယ်..။ မေး နေတာ ကလည်း..သူတို့ အိမ် သွားမေး နေ တာလေ..။ နောက် ဖေး ခန်း က..နား ထောင် နေ ရင်း..မနေ နိုင် ပဲ ၀င် လာ ပြီး..
ဒီ စစ်သား ကြီး တွေ ကျ တော့ လည်း ..တကယ့်ကို..စိတ် ကြမ်း ကိုယ် ကြမ်း..စစ် ကြီးကို ပီပီ သသ ရုပ် ဆိုး အကျည်း တန် စေခဲ့ တဲ့..စစ်သား ပီပီ သသ ကြီး တွေ ပါ လား လို့..တွေး နေ မိ တော့ တယ်။
woah..such long post naw :P
hee..but i enjoy reading..
Youtube မှာ the Burmese Harp ဆိုပြီးရှာကြည့်တော့ အပိုင်း ၂ ပိုင်းတွေ့ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူတွေ အလွယ်တကူကြည့်နိုင်ကြအောင် link လုပ်ဘို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။
ကျမ ဘလော့ကို စာလာဖတ် တာ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟစ်တိုင်မှာ - လန်ထောင်စပ်စုလေး- ဆိုတဲ့ ကလောင်နဲ့ရေးတဲ့ စာများကိုလ ည်း..အမြဲ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင် အတွက်..လင့်တချို့တော့..ညီမ ငယ်တယောက်..အထက် မှာ ပေးထား
ပါတယ်။ ယူကျု မှာ လည်း ရနိုင် မည် ထင်ပါသည်။
downloaded parts တွေကို ပြန်ဆက် တော့ password တောင်းနေပါတယ်ဗျာ။ password လေး ပြောပြပေးကြပါခင်ဗျာ။
Sorry to know that..u can't combine altogether.
I couldn't help you to get Password.. May be wait for other plp . :)
မကေ ဗမာ့စောင်းထဲက စောင်းတီးတဲ့သရုပ်ဆောင်ရဲ့နာမည်က မီဇုရှိမ့ လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဂျပန်က ထင်တယ်။ ဂျပန်သံ ပီပီသသ လေး သိလိုက်ရတာပေါ့။
ကျွန်တော်လဲ ဗမာ့စောင်းကိုကြည့်ဖြစ်လို့ပါ ဒေါင်းဖို့ခက်ခဲနေမယ်ထင်လို့ သူများပေးထားတာလေးပြန်မျှတာပါ...
ကိုဇော်ထွတ်ရေ- ကျေးဇူးပါ။ အပေါ်က.. မိတ်ဆွေ တယောက်လို ကြည့်ချင်သူတွေ အတွက် သိပ်ကို အဖိုးတန်သွားတယ်။း)